ဒူဒူကြီး: "Performance Standard for Protective Coating"
ကိုအောင်ထွဋ်ရဲ့ "AH" ဘလောက်ဂ်မှ "PSPC – Performance Standard for Protective Coating အကြောင်း" ဆောင်းပါးကို၊ ပြန်လည်ကိုးကားကာ၊ ဖော်ပြပါတယ်။
Fig. PSPC sea water ballast tank
PSPC resolution ကို GRT တန် (၅၀၀) နှင့်အထက်၊ သဘေ်ာတွေရဲ့ sea water ballast tank တွေနဲ့ LOA အလျှား (၁၅၀) မီတာနှင့်အထက်၊ bulk carrier သဘေ်ာတွေရဲ့ double-side skin spaces တွေ၊ တည်ဆောက်တဲ့အခါ၊ လိုက်နာဖို့ ပြဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် (၂၀၁၃) ဇန်န၀ါရီ (၁) ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းတည်ဆောက်မယ့် DWT တန် (၅၀၀၀) နဲ့အထက်၊ ရေနံစိမ်းတင်ဆောင်မယ့် Crude Oil Tanker တွေရဲ့ sea water ballast tank တွေတည်ဆောက်တဲ့အခါ၊ လိုက်နာဖို့ IMO ရဲ့ Maritime Safety Committee မှ၊ MSC. 288(87) resolution ကိုလည်း၊ ထပ်မံပြဌာန်းထားပါတယ်။ MSC 215(82) resolution နဲ့ MSC. 288(87) resolution တို့ဟာ၊ SOLAS II-1/ 3-2 regulation နဲ့ SOLAS ရဲ့ Chapter II-3-2 regulation တို့အရ၊ (၂၀၁၃) ဇန်န၀ါရီ (၁) ရက်နေ့မှစပြီး၊ အသက်ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ PSPC ရဲ့ အဓိက ရည်မှန်းချက်ကတော့၊ သဘေ်ာရဲ့ ballast tank တွေနဲ့ double-side skin spaces တွေမှာ အသုံးပြုမယ့် သင်္ဘောသုတ်ဆေးတွေဟာ၊ သက်တမ်းအားဖြင့် (၁၅) နှစ်အထိ ကြာရှည် ခံနိုင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. PSPC procedure
PSPC မှာ TPA ဆိုတဲ့၊ "tripartite agreement" နဲ့ CTF ဆိုတဲ့ " coating technical file" ဆိုပြီး၊ အပိုင်း (၂) ပိုင်း ပါဝင်ပါတယ်။ 'TPA" ဟာ သင်္ဘောတည်ဆောက်ရန်အပ်နှံမယ့် 'သဘေ်ာပိုင်ရှင်'၊ သင်္ဘောကို တည်ဆောက်ပေးမယ့် 'သဘေ်ာကျင်း' နဲ့ သဘေ်ာမှာအသုံးပြုမယ့် သင်္ဘောသုတ်ဆေးတွေကို၊ ထုတ်လုပ်ရောင်းချမယ့် အဖွဲ့အစည်းတို့ရဲ့၊ ကြိုတင်သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ဘော တည်ဆောက်ရာမှာ အသုံးပြုမယ့် သံပြားတွေရဲ့ ကနဦး primary surface preparation ကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ အချောသတ် secondary surface preparation ကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ သင်္ဘောဆေးသုတ်တဲ့၊ အဆင့်တိုင်းမှာ ဆောင်ရွက်သွားမယ့်၊ လုပ်ငန်းစဉ် process တွေကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ သင်္ဘောကျင်းရဲ့ သင်္ဘောတည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံနဲ့ အသုံးပြုမယ့် facility တွေဟာ PSPC resolution နဲ့ သင့်လျှော်မှု ရှိမရှိ၊ အစရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေအပေါါ၊ အခြေခံထားပါတယ်။ "CTF" ကတော့ သင်္ဘောဆေးသုတ်တဲ့ အဆင့်တိုင်းရဲ့ မှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Classification Society အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ၊ PSPC resolution ကိုလိုက်နာပြီး၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ခြင်းရှိမရှိ၊ စစ်ဆေးကာ သက်သေခံ statutory certificate လက်မှတ် ထုတ်ပေးပါတယ်။
PSPC resolution အရ ကနဦး primary surface preparation နဲ့ အချောသတ် secondary surface preparation တွေမှာ လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း regulations တွေရှိပါတယ်။ ကနဦး primary surface preparation မှာ soluble salt measurement procedure ဆိုတဲ့ သံပြားတွေမှာ ပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ 'ဆား' ပမာဏတိုင်းတာမှု၊ salt cleaning procedure ဆိုတဲ့ ပါဝင်နေတဲ့ဆားသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ DFT လို့ခေါါတဲ့ သင်္ဘောဆေးရဲ့အထူ maximum dry film thickness တိုင်းတာစစ်ဆေးမှုတို့၊ ပါဝင်ပါတယ်။ သင်္ဘောဆေးတွေ ပျက်စီးမှုရဲ့ (၇၀) % ဟာ၊ ကနဦး primary surface preparation ဆောင်ရွက်ရာမှာ၊ အားနည်းခဲ့လို့ ပေါါပေါက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သဘေ်ာတစီးကိုတည်ဆောက်ရာမှာ steel plate လို့ခေါါတဲ့ သံပြားတွေ၊ profile beams ဆိုတဲ့ ပုံသဏ္ဍန်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ 'ယက်မ' တွေနဲ့ steel plate နဲ့ profile beam တို့ကိုတွဲဆက်ပေးမယ့် stiffener လို့ခေါါတဲ့ ဒေါက်တိုင် brackets တွေကိုအသုံးပြုရပါတယ်။ transverse Web, longitudinal girder တွေနဲ့ L - bar တွေဟာ၊ profile beam တွေဖြစ်ပါတယ်။
ကနဦး primary surface preparation stage ဆောင်ရွက်ဖို့၊ steel plate, profile beams နဲ့ stiffeners တွေကို၊ surface profile roughness (၃၀ ~ ၇၅) မိုင်ခရွန်မီတာအထိရရှိအောင်၊ Sa 2.5 အရွယ်အစားရှိတဲ့ grit တွေကိုသုံးပြီး၊ blasting ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ grit blasting ဆောင်ရွက်ဖို့၊ သဘေ်ာကျင်းတွေမှာ 'automatic grit blasting machine' တွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ grit blasting မဆောင်ရွက်ခင်၊ steel plate, profile beams နဲ့ stiffeners တွေမှာ ကပ်ငြိ၊ ပေကျံနေတဲ့ ဆားတွေ၊ အမှုန်တွေ၊ ဆီချေးတွေနဲ့ စက်ဆီတွေကို၊ fresh water ကိုအသုံးပြုကာ high pressure wash အနေနဲ့ ဆေးကြောခြင်းနဲ့ ချွတ်ဆေး thinner ကိုအသုံးပြုကာ ဆေးကြောခြင်းတို့ကို၊ လုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။ grit blasting ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခါ၊ surface profile roughness တိုင်းတာခြင်းနဲ့ soluble salt measurement procedure ပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ 'ဆား' ပမာဏ တိုင်းတာခြင်း တို့ကို၊ ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အောက်ခံဆေး primer paint ကို၊ စတင်သုတ်ရပါတယ်။ အောက်ခံဆေးသုတ်ရာမှာ 'automatic painting machine' တွေကို၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ primer paint သုတ်ပြီးတဲ့အခါ DFT လို့ခေါါတဲ့ သင်္ဘောဆေးရဲ့အထူ maximum dry film thickness တိုင်းတာ စစ်ဆေးမှုကို၊ ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ primary surface preparation ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခါ၊ steel plate, profile beams နဲ့ stiffeners တွေကို သင်္ဘောတည်ဆောက်ရာမှာ၊ စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
steel plate, profile beams နဲ့ stiffeners တွေကို၊ တခုနဲ့တခုမတွဲဆက်ခင်၊ အစွန်း sharp edge တွေကို၊ (၂) မီလီမီတာ round radius အရွယ်အစားအထိ၊ အချောသတ်ပေးဖို့လို့ပါတယ်။ အစွန်း sharp edge တွေမှာ steel plate, profile beams နဲ့ stiffeners တွေရဲ့ edges တွေသာမက၊ flanges တွေရဲ့ edges တွေ၊ scallops holes တွေရဲ့ edges တွေနဲ့ draining holes, air holes, key holes , lightening holes တို့ရဲ့ edges တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့ small holes, scallps တွေနဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်မမှန်တဲ့ အပေါက်ငယ်လေးတွေကိုတော့ manual grinding ဖြင့်၊ အချောသပ်ပေးရပါတယ်။
Fig. Cargo hold construction ofatypical bulk carrier
Fig. Transverse section ofatypical bulk carrier
ဒီနေ့ခေါါတ်ကာလ၊ သဘေ်ာတွေတည်ဆောက်ရာမှာ 'modern shipbuilding methods' အဖြစ်၊ "block construction" method ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ hull နဲ့ superstructure တွေကို prefabricated sections အဖြစ်၊ block အပိုင်းလိုက်တည်ဆောက်ကာ၊ တခုနဲ့တခုတွဲဆက်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ prefabricated sections အဖြစ်၊ primary surface preparation နဲ့ sharp edge grinding ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့ steel plate, profile beams နဲ့ stiffeners တွေတခုနဲ့တခု တွဲဆက်ခြင်းကို၊ 'block fit-up stage' လို့ခေါါပါတယ်။ block တခုအဖြစ် welding ဂဟေဆော်ကာတွဲဆက်ပြီးတဲ့အခါ၊ ဂဟေလိုင်း welding seams တွေကို 'ISO 8501-2 P2 standard' အရ၊ treatment ပြုလုပ်ပေးရပါတယ်။ treatment ပြုလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ block structure တခုလုံးကို၊ 'NDT' ဆိုတဲ့ 'non-destructive test' နည်းလမ်းဖြင့်၊ စစ်ဆေးပါတယ်။
"NDT" နည်းဖြင့်စစ်ဆေးပြီးတဲ့ block structure တွေကို၊ blasting လုပ်မယ့် နေရာသို့ပို့ဆောင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် block structure မှာ 'PMA' လို့ခေါါတဲ့ 'permanent means of access' သို့မဟုတ် 'out-fittings' တွေဖြစ်တဲ့၊ rails, ladders တွေနဲ့ independent platforms တွေပါရှိခဲ့လျှင်၊ structure နှင့်အတူတွဲ၊ တတ်ဆင်ပြီးမှသာ blasting ကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်။ 'block fit-up stage' မှာ welding, corrosion နဲ့ burn marks တို့ကြောင့် ကနဦး primary surface preparation stage ဆောင်ရွက်စဉ်၊ သုတ်ခဲ့တဲ့ အောက်ခံဆေး primer paint အချို့ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ ပျက်စီးသွားတဲ့ ဆေးသားနေရာမှာသာ၊ primer paint ပြန်မသုတ်ပဲ tank ရဲ့ block structure တခုလုံးကို၊ blasting လုပ်ပြီး secondary surface preparation ကိုဆောင်ရွက်ကြရပါတယ်။
Fig. Blasting hall
primary surface preparation stage ကဲ့သို့ surface profile roughness (၃၀ ~ ၇၅) မိုင်ခရွန်မီတာ အထိရရှိအောင်၊ Sa 2.5 အရွယ်အစားရှိတဲ့ grit တွေကိုသုံးပြီး၊ blasting ကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်။ အကယ်၍ surface profile roughness အနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းမရရှိခဲ့တဲ့ နေရာတွေကို၊ grinding လုပ်နိုင်ပါတယ်။ grinding ဟာ tank ရဲ့ surface profile roughness ကိုပျက်စီးစေတဲ့အတွက်၊ PSPC resolution အရ၊ block structure တခုလုံးရဲ့ (၃) % ဧရိယာကိုသာ၊ grinding လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ block structure တခုလုံးကို၊ blasting လုပ်ပြီးတဲ့အခါ၊ grit ကင်းစင်မှုရှိမရှိ၊ dust ဖုန်တွေကင်းစင်ပြီး သန့်ရှင်းမှု ရှိမရှိ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ surface profile roughness အဆင့် ရှိမရှိ၊ ဆားတွေ၊ အမှုန်တွေ၊ ဆီချေးတွေနဲ့ စက်ဆီတွေ ကပ်ငြိ၊ ပေကျံနေခြင်းရှိမရှိ၊ လေထု atmosphere နဲ့ သံပြားရဲ့ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ relative humidity နဲ့ blasting hall ထဲမှာရှိတဲ့ ventilation အခြေအနေ၊ အစရှိတာတွေကို စစ်ဆေးပြီး၊ လက်ခံ အတည်ပြုနိုင်ခဲ့လျှင် secondary coating ဆေးသုတ်ခြင်းကို အမြန်ဆုံးစတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သင်္ဘောကျင်းတွေမှာတော့ blasting hall ဆိုတဲ့ အလုပ်ရုံတွေမရှိတာကြောင့် အပြင်မှာပဲ blasting ကိုဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ ဒီအခါ ရာသီဥတုအခြေအနေနဲ့ humidity control တို့ကြောင့် PSPC resolution ရဲ့ requirement အတိုင်းရရှိဖို့ မလွယ်တာကို၊ တွေ့ရပါတယ်။ ဆေးသုတ်တဲ့အခါ first coat spray နဲ့ strip coat ဆိုပြီး၊ ဆေးနှစ်လွှာသုတ်ပါတယ်။ ဆေးနှစ်လွှာရဲ့ 'NDFT' လို့ခေါါတဲ့ ဆေးသား အထူ nominal dry film thickness ဟာ (၃၂၀) မိုင်ခရွန်မီတာ ရှိရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ block painting ဆောင်ရွက်စဉ်မှာ block erection joint နေရာတွေနဲ့ tank water-tightness test လုပ်မယ့် welding seam line တွေကို၊ masking tape ကပ်ကာ၊ ဆေးမသုတ်ပဲ ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။
block stage painting အဖြစ်ဆေးသုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါ၊ block တခုနဲ့တခုတွဲဆက်ခြင်း block erection ကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်။ block တခုနဲ့တခုတွဲဆက်တဲ့အခါ erection butt joint နေရာတွေနဲ့ အခြားပျက်စီးသွားတဲ့ နေရာအနည်းငယ်မှာ grinding နဲ့ power tooling ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ primary surface preparation stage ကဲ့သို့ block structure တခုလုံးရဲ့ (၃) % ဧရိယာကိုသာ၊ grinding လုပ်ခွင့် ရှိပါတယ်။ erection joint တွေနဲ့ tank tightness အတွက်၊ ချန်ထားတဲ့ welding seam line တွေကို special blasting tools တွေအသုံးပြုပြီး၊ blasting ကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်။ blasting လုပ်ရာမှာ ဆေးသုတ်ထားတဲ့ coating ဧရိယာကို (၂) % ထက်ပိုပြီး၊ မထိခိုက်စေဖို့သတ်မှတ်ထားပြီး၊ အကယ်၍ (၂) % ထက်ပိုကာ၊ ထိခိုက်မိပါက၊ tank coating damage အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး၊ tank ရဲ့ block တခုလုံးကို၊ ပြန်လည်ပြီး re-blasting ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ crude oil tanker တွေရဲ့ tank top area တွေမှာတော့ coating ဧရိယာထိခိုက်မှုကို (၂၀) % အထိ၊ ခွင့်ပြုထားပါတယ်။
block တခုနဲ့တခုကို erection အနေနဲ့ တွဲဆက်တဲ့အခါ၊ ချိန်သားမကိုက်တဲ့ mis-alignment တွေကြောင့်၊ T-web တွေနဲ့ stiffener တွေကို၊ adjustment အဖြစ်ပြန်လည်ချိန်ညှိတဲ့အခါ၊ burn marks တွေနဲ့ welding တို့ကြောင့် ပျက်စီးရတာမျိုးတွေရှိပေမယ့်၊ coating ဧရိယာထိခိုက်မှုကို ကန့်သတ်ကာသတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိတာကိုလည်း၊ တွေ့ရပါတယ်။ erection butt joint တွေနဲ့ မသတ်ဆိုင်တဲ့ bilge keel ဧရိယာတွေမှ round brackets အကြီးစားတွေရဲ့ mis-alignment ကြောင့် တပိုင်းတစ လှဲလှယ်အစားထိုးခြင်းအဖြစ်၊ partial renew ဆောင်ရွက်ရတဲ့ အခါမှာတော့၊ (၂%) ထက်ပိုပြီး၊ ထိခိုက်ခဲ့ပါက tank coating damage calculation မှာ ထည့်သွင်း တွက်ချက် ပါတယ်။ ပျက်စီးသွားတဲ့ coating damage ဆေးသားနေရာတွေကို special blasting tool ဒါမှမဟုတ် grinding တို့ဖြင့် ပြုပြင်ပြီး၊ နဂိုမူလရှိနေတဲ့ ဆေးသားလွှာနဲ့ တသားတည်း ဖြစ်စေဖို့၊ နောက်ထပ် ဆေးမသုတ်ခင် မူလဆေးသားလွှာနဲ့ ပြုပြင်မယ့်နေရာကြားကို fathering လုပ်ပေးရပါတယ်။
blocks တွေကို erection အနေနဲ့ တွဲဆက်ပြီး၊ tanks တွေကို tightness test အဖြစ် ရေလုံ မလုံ၊ စစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါ၊ tank ရဲ့ ဆေးသားအလွှာပျက်စီးမှုကို၊ ထပ်မံစစ်ဆေးရပါတယ်။ ဆေးသားအထူ တိုင်းတာတဲ့ DFT measurement အဆင့်တိုင်းကို၊ မှတ်တမ်းတင် record ထားရှိပါတယ်။ သဘေ်ာရဲ့ ballast tank တွေနဲ့ double-side skin spaces တွေမှာ အသုံးပြုထားတဲ့သင်္ဘောသုတ်ဆေးတွေ၊ သက်တမ်းအားဖြင့် (၁၅) နှစ်အထိ ကြာရှည်ခံနိုင်စေဖို့ ပုံမှန် regular maintenance and repair အနေနဲ့၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေ၊ လုပ်ဆောင်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ship personals လို့ခေါါတဲ့ သဘေ်ာမှ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ စက်မှုအရာရှိချုပ်လို့ခေါါတဲ့ Technical Superintendent တို့ဟာ၊ (၆) လတခါ၊ ballast tank တွေနဲ့ double-side skin spaces တွေရဲ့ coating condition အခြေအနေကို၊ စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်ပါက၊ minor touch-ups ကိုဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်။
သဘေ်ာရဲ့ ballast tank တွေနဲ့ double-side skin spaces တွေကိုစစ်ဆေးခြင်း inspection တွေနဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု regular maintenance and repair တွေကိုဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို၊ CTF လို့ခေါါတဲ့ coating technical file မှာ မှတ်တမ်းတင် record ထားရှိရပါတယ်။ Classification Society အဖွဲ့အစည်းမှလည်း၊ (၅) နှစ် ကာလတခါဆောင်ရွက်ရတဲ့ class renewal survey လို့ခေါါတဲ့ special survey၊ special survey အပြီး နောက်ထပ် (၂) နှစ်ခွဲမှ (၃) နှစ်ကာလအတွင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့ intermediate survey နဲ့ တနှစ်တခါဆောင်ရွက်ရတဲ့ annual survey တိုင်းမှာ၊ သဘေ်ာရဲ့ ballast tank တွေနဲ့ double-side skin spaces တွေကိုစစ်ဆေးပြီး၊ လိုအပ်ပါက အကြီးစားပြင်ဆင်ခြင်း majour repair အဖြစ်၊ သဘေ်ာကျင်းမှာပြန်လည်ပြုပြင်ရန်၊ ညွှန်ကြားပါတယ်။
Reference and credit to : PSPC – Performance Standard for Protective Coating အကြောင်း - ကိုအောင်ထွဋ်, MSC. 215(82) resolution and MSC. 288(87) resolution
Image credit to : http://www.international-marine.com/, http://www.bulkcarrierguide.com/, http://www.watermarkpacific.com/
Posted by ကိုထွန်း at 04:10
SHWE ZIN U 26 July 2012 at 05:47
စာလာဖြစ်ပါတယ် ရွှေစင်ဦး နားမလည်တဲ့ အပိုင်းတွေ ဖြစ်နေလို့ မဆွေးနွေး နိုင်တာခွင့်လွှတ်ပါ .. ဖတ်ပြန် သွားတယ်